Beesha Caalamka oo ku baaqday in deg deg loo bilaabo shirka arrimaha doorashooyinka - Home somali news leader
Home NEWS Beesha Caalamka oo ku baaqday in deg deg loo bilaabo shirka arrimaha...
Beesha Caalamka oo walaac ka muujisay warkii ka soo baxay dowlada federalka ee shirka Doorashooyinka ee ahaa inuu fashilmay shirkii uga socday Muqdisho madaxda dowlada federalka iyo Madaxda Maamul goboleedyada dalka.
War Saxafadeed ay beesha caalamka ka soo saareen arrintan ayaa u qornaa sidan;
Saaxiibada Beesha Caalamka waxay ka welweleen war-saxaafadeedyadii mas’uuliyiinta qaarkood ay shalay la wadaageen bulshada kuna tilmaameen kulankii gogol-xaadhka iyo wadatashiga ahaa ee albaabadu u xidhnaayeen una dhexeeyay madaxda Dowladda Federaalka ah iyo Dowlad Goboleedyada aanu sameyn wax horumar ah.
Waxaan ku boorinaynaa madaxda inay si deg deg ah ugu laabtaan wadahadalada si ay heshiis uga gaaraan arrimaha harsan, iyagoo u maraya isu-tanaasul. Waxaan mar kale ku celinaynaa in saaxiibada [caalamku] aanay taageeri doonin geeddi-socod babar-socod ah, mid aan loo dhamayn, ama dadaallo cusub oo horseedaya kordhinta muddo xileedkii hore.
Previous articleShirka Golaha Wasiirada oo loogaga hadlay qodobo muhiim ah
Next articleBurmese opposition figure Dr Sasa: ​​’The world must stop a new genocide’